PDT LED PHOTOTHERAPY Factory - China PDT LED PHOTOTHERAPY Mpanamboatra, mpamatsy
Blue Cool Light LED Jiro Dental Whitening Machine T6
Ny jiro manga mangatsiatsiaka dia mampihetsika ny gel manadio ary mampihena ny lokon'ny nify amin'ny alàlan'ny fantsom-pandriana dentin amin'ny fotoana fohy indrindra, manala ny nify ho fotsy mangirana ivelany sy anatiny.
Whitening laser amin'ny nify cosmetika matihanina T5
Ny fanoloana nify dia fomba tsotra sy mpandala ny nentin-drazana hanatsarana ny fisehoan'ny tsiky sy hampihenana ny lokon'ny nify.
Ny famelomana hoditra amin'ny tarehy tarehy photodynamic dia nitondra fitsaboana jiro biolojika L9
Ny LED Skin Rejuvenation dia ny fifandraisan'ny hazavana, atolotra amin'ny alàlan'ny Light Emitting Diodes (LEDs), mba hampavitrika ireo mpandray sela izay mahatonga azy ireo hamokatra collagen na hitombo.
Masinina manadio nify manify nify miaro MC01
Ny hazavana mangatsiaka avy hatrany Teeth Whitening Accelerator dia afaka manova ny angovo herinaratra ho jiro manga mahery.
Fomba maoderina 5 Photon LED fahazavana Photodynamic PDT Fanavaozana ny hoditra L8
Ny fitaovana dia mandray PDT (Photon Dynamic Technology). Misy maody 5 an'ny LED hanatsarana ny toe-piainan'ny hoditra amin'ny ankapobeny.
Clinic Dental Porcelain 3d Teeth Shade Guide Ho an'ny Genetika Yellow Teeth RT20
Ity torolàlana 20 Shades tsara tarehy ity dia hanampy anao hampiseho amin'ny marary ny toerana hijoroan'izy ireo amin'ny fotsifin'ny nifiny sy handrefesany ny fandrosoany mandritra ny fizotran'ny fanadiovana nify.
Fanoroana aloky ny nify momba ny nify 3d, 27 loko CE fanamarinana RT27
Ity Torolàlana tsara tarehy 27 Shades ity dia hanampy anao hampiseho amin'ny marary ny toerana hijoroan'izy ireo amin'ny fotsifin'ny nifiny sy handrefesany ny fandrosoany mandritra ny fizotran'ny fanadiovan-nify.
Ny fampiasana ny klinika dia nitondra jiro nify Bleaching Home Laserteeth whitening machine T2
Milina fanadiovana nify azo entina ampiasaina any an-trano miaraka amina LED matanjaka 24 T9
Ny fizotran'ny 30 minitra dia miantoka ny fanatsarana ny alokaloka dimy ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Tsy nofinofy ny mampamirapiratra ny nifinao amin'ny famirapiratana.
Teknolojia vaovao fisehoana maoderina 7color PDT Fanavaozana ny hoditra L6A
Ny fanadihadiana dia manamafy fa ny angovo LED mitovy amin'izany dia azo ampiasaina hanakanana ny fananganana collagen, izay mety hanampy amin'ny fitsaboana ny ratra. Amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny halavan'ny halavany, ny sela dia afaka mamadika sy miala.